VLC 3.0.10 inosvika ichivandudza zvishoma zvezvose, asi pasina zvakawanda kuratidza | Linux Vakapindwa muropa
VideoLan ichangobva kuzivisa kuvhurwa kweshanduro nyowani yeakakurumbira multimedia player. Ndezve VLC 3.0.10, chikamu chitsva icho, pakutanga, hachisanganisi shanduko dzinonakidza kwazvo, kunyangwe hazvo vakagadzirisa pazvikamu zvakawanda. Kuburitswa uku kunotevera v3.0.9.2 yesoftware iyo yatovepo mumahofisi epamutemo ezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, asi vamwe vazhinji vanoramba vakanamatira muv3.0.8 yakaburitswa mwedzi yapfuura.
Sezvatinoverenga mu peji rako rekurodha, VLC 3.0.10 inosvitsa maficha manyowani sekuvandudza mune manejimendi maMP4 mafaira kana rutsigiro rwakagadziridzwa rweMacOS Catalina, yazvino vhezheni yeApple desktop desktop system. Kana iwe usinga wedzere dzimwe shanduko ku Iyi link, chete nhau dzavakaunza muchikamu chitsva ichi ndeauinacho mushure mekucheka
VLC 3.0.10 Zvakakosha
Yakagadziridzwa Twitch uye VLSub zvinyorwa.
Kugadziridzwa kwakasiyana siyana uye kugadzirisa muDVD manejimendi.
Kugadziriswa kwekushambadzira kutsigira kwakavandudzwa.
Gadzirira vhidhiyo inopa pane macOS.
Kuvandudzwa kwakasiyana muMP4 manejimendi.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweMacOS Catalina.
Wakawedzera rutsigiro rweSMB2 / 3 kugovana.
Inosanganisira akati wandei ekuchengetedza zvigamba kudzivirira DOS kurwisa pane iyo microDNS sevhisi.
VLC 3.0.10 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa ... kana kwete. Panguva yekunyora uku inogona kutorwa kubva yayo yepamutemo webhusaiti yeWindows uye macOS, asi vashandisi vanovimba zvakanyanya nemamwe masisitimu ekumisikidza vachazofanira kumirira maawa mashoma kana kunyange mazuva kuti vakwanise kugadzirisa. Kune akawanda maLinux anogovera, VideoLan inotipa iyo Snap vhezheni iyo ichiri yakanamatira pa v3.0.8 ye software. Kune rimwe divi, a flatpak package, asi izvozvi ichiri pav3.0.9.2. Sarudzo dzeApple neIOS dzichauya kuzvitoro zvavo munguva pfupi iri kutevera.
Chero zvazvingaitika, patova neshanduro itsva yeVLC uye isu tichakurumidza kuishandisa pane edu Linux system. Vashandisi vanofarira kuyedza zvichauya, vanogona gadza VLC 4 beta kubva kune yayo Snap package.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » VLC 3.0.10 inosvika ichivandudza zvishoma zvezvinhu zvese, asi pasina nhau dzakatanhamara
Ngatione kana vachigadzirisa zvinyorwa zvidiki neChromecast, iri kutotamba, nekuti vhezheni 3 inowirirana neChromecast asi zvinyorwa zvacho hapana kana.
Pindura kuna Johui
Fedora 32 ikozvino yavapo, ine Linux 5.6 uye GNOME 3.36